Obi ụtọ 2016, Chinese New Year-OZI-Hunan Astiland Medical aesthetics Technology Co., Ltd.
Cellulites mwepụ igwe
Ọgwụgwọ anụ ahụ igwe
Laser mma igwe
Hair mwepụ igwe
Anti ndọlị igwe
Multifunctional mma igwe
Photodynamic ọgwụ igwe
anwụrụ ọkụ evacuator
Mma igwe ngwa
Obi ụtọ 2016, Chinese New Year
Oge: 2015-12-20 Hits: 132
Ezigbo enyi m，Ezi afọ ọhụrụ!
Daalụ maka gị niile na-akwado ASTILAND n'afọ gara aga, ezi obi na-achọ gị ezi ahụ ike, nnukwu akụ na ụba na oké chioma. Obiọma ga-gwara na anyị Chinese New Year na-abịa, ga-amasị anyị na-agwa gị na anyị Spring Festival ezumike oge tupu dị na mbụ mere na i nwere ike na-eme atụmatụ ya.
anyị 2016 Spring Festival Holiday bụ site Feb 7th, 2016 ka Feb 15, 2016, biko obiọma tụlee ka oge na-eme ka a plan. Mgbe oge tupu ezumike, anyị mmepụta oge ga-abụ nnọọ ọrụ n'aka. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla ọhụrụ iji ma ọ bụ ihe ọ bụla n'oge a, biko obiọma edebe ya tupu ka zere ihe ọ bụla na-egbu oge na kpatara na ememe.
N'otu oge ahụ, anyị nwere a ezumike sales n'etiti Dec 25,2015 - Feb 15, 2016.Rute ugbu a, All anyị kwuru bụ nti , na-esi na a pụrụ iche 20% discount plus. Ajụjụ ọ bụla biko obiọma kpọtụrụ ahịa E-mail.
Na Mbụ Page : 2016 First Ngosi Rịba
Next Page : Obi ụtọ na Mid-mgbụsị akwụkwọ ememme
Tinye: Building 13, Xinggong Industry Park, Yuelu District, Changsha, Hunan, China
HOME / ngwaahịa / GBASARA ANYỊ / OZI / KPỌTỤRỤ ANYỊ